सम्पत्ति र दाजु-भाइ नभएका होइनन्, तर गजेन्द्रको वास बनेको छ नौबिसे खोलाको पुल !
धादिङ : यी हुन् गजेन्द्र आछमी । न त जाडो, न त घाम न पानी केहीकाे परवाह छैन उनलाई । गोलो बाटुलो अनु`हार अनि हरियो र रातो मिसिए`को गल`बन्दी लगाएका ।
फस्नर नभएको कालो ज्याकेट अनि का`लो पाइन्ट ।
नौबिसे खो`लामा टोलाउने, भो’क लागे होटल च’हार्ने, सुत्न परे नौबिसे खोलाकै पुल`मुनि जाने । यसै`गरी बित्ने गरेको छ गजेन्द्र आछामीको दैनिकी ।
केही वर्ष`अघि`देखि मान`सिक सन्तुलन गुमा`एका गजेन्द्रका बुबा गोरे सार्की र आमा मंग`ली सार्कीको मृ’त्यु भए`पछि उनी एक्लो र बेवा`रिसे बनेका हुन् । उनको अवस्था हेर्ने हो भने न दाजुभाइ, न सम्पत्ति केही नभएको र व्यवहा`रिसे जस्तै बस्दै आएका छन उनी ।
तर गजेन्द्र आछामीको धादिङ्ग जिल्ला धुनि`बेशी नगरपालिका वडा नं ८ टापुडाँडामा घर सम्पत्ती र २ दाजुहरु पनि छन् ।
तर गजेन्द्र करीब २ वर्ष देखि यसैगरी त्रिभुवन राज`पथको
धुनिबेँशी नगरपालिका वडा नं ६ र ७ को सिमा पर्ने नौबिसे पुलमुनि आफ्नो बास बनाएर बसिरहेका छ्न् ।पुल`मुनि नै रात परे सुत्ने, पानी परे ओत लाग्ने र घाम लागे शीतल खाने उनकाे वास छ । यिनको घर भन्नु नै यही पुल बनेको छ ।
२०७७ चैत्र २९, आईतवार १४:४७ गते 1 Minute 415 Views
बेलायत छाडेर खुसी खोज्दै नेपाल आएकी ‘मुन्नी’ !
प्रेमिकाको आमालाई बचाउन मिर्गौला दिए, तर उपचार सफल भएपछि युवतीले अर्कैसँग बिहे गरिन !
पुसको ठण्डी जस्तै चिसिएको जितु र फुलन्देको आमाको सम्बन्ध !